Ihe ị na-anụghị na Apple Keynote: iBeacons | Martech Zone
Satọde, Satọdee 14, 2013 Satọde, Satọdee 14, 2013 Douglas Karr
Ọ bụ naanị echiche m, mana ngosipụta Apple gara aga dị ka ọ ga-abụ obere nnabata keara mara. Nhazi Apple bụ ngọzi na nkọcha nye ụlọ ọrụ ahụ. Ọ bụrụ na Apple anaghị ahapụ nnukwu ngwaahịa ma ọ bụ mgbanwe mgbanwe, ndị na-ege ntị na-atamu. Ọ bụ echiche dị mkpụmkpụ nke ụlọ ọrụ nke duziri ụlọ ọrụ teknụzụ ruo ọtụtụ iri afọ na teknụzụ, imepụta na ịba uru.
Site na isi edemede kachasị ọhụrụ, otu n'ime okwu ndị dị jụụ nke eleghara anya bụ ngwaahịa a na-akpọ iBeacons. Naanị ụlọ ọrụ mgbasa ozi ole na ole akpọtụrụla iBeacons ruo ugbu a, gụnyere isi, Onye na-enye Apple, GigaOm na Forbes. Isiokwu ndị ahụ niile kwesịrị ịgụ!
iBeacons bụ ndị na-ere ahịa amaghị ma jiri teknụzụ BlueTooth Smart. Enwere ike ịnwe ọnụahịa atọ nke mgbama ($ 99) gburugburu ụlọ ahịa ma nwee ike ịkọwa ọnọdụ gị n'ụzọ ziri ezi. Cheedị echiche ikike ọ ga-enwe! Ọ bụrụ n ’ịnọ n’ụlọ ahịa, ị gaghị na-awagharị na-achọ ihe ịchọrọ. Ngwa ndepụta ịzụ ahịa n'ọdịnihu nwere ike ịtụ ndepụta gị ka ị nwee ike rụọ ọrụ nke ọma site na ụlọ ahịa - ma tinye ụfọdụ ọpụrụiche n'okporo ụzọ (ma ọ bụ n'ụzọ). Nke a na - emeziwanye ahụmịhe ndị ahịa ma na - ewetara ndị ahịa ọpụrụiche na ezigbo oge. Nakwa, ngwaọrụ ahụ na-edekọ ebe ị kwụsịrị n'ụzọ… ma eleghị anya na-ejide ozi ndị ahịa maka ọdịmma gị. Chaị.
Apple Insider kpọrọ micro-ọnọdụ a. Ihe agbaghara na isi okwu Apple bụ na nke a abụghị ọdịnihu - nke a bụ ugbu a. Ngwaọrụ onye nrụpụta sọftụwia maka iOS7 agụnyere teknụzụ na iBeacons adịworị ire ere.
Sep 23, 2013 na 9:30 PM
nnukwu post banyere nke a. Geofencing adịla ruo nwa oge mana nke a na-eme ka ọ dị mfe iji soro ihe n'ime ụlọ ahịa.– onyenwe anyị maara ole nordstrom kwesịrị ịzụta .. ma ọ bụ na m ga-ebu naanị m otu .. nke ahụ ga-enye aka
Sep 23, 2013 na 10:10 PM
@Stevie: disqus Echere m na nke a bụ nrọ nye ọtụtụ n'ime anyị ndị kpọrọ asị asị. Ọ ga-amasị m ịnweta ebumnuche, banye na ya, pụọ ma laghachi n'ihe ndina m 🙂
Sep 23, 2013 na 10:59 PM
Douglas .. nke ahụ bụ ihe m nọ ebe a maka .. M na-enyere ndị mmadụ aka ịnọ na-echekwa ma zụta kpọmkwem ihe ha chọrọ site na onlilne ……. n'oge ezumike, enwere m ndepụta nke ihe na m ga-atụgharị mmadụ ole na ole iji hụ ma ọ bụrụ na nyiwe ha ka na-aga na / ma ọ bụ gbagoo iji nye ha ụfọdụ visibiliti mgbe ọ na-eme ka ọ dị mfe ịzụ ahịa.
geofencing m hụworo ma bụrụ akụkụ nke m ga-enweta pings maka ihe dị na ire ma ha gwa m ihe m kwesịrị ịma …… ma ọ dị mma ịfụ ndị nọ na ahịhịa ahụ n'ihi na ọ na-emefu ego ọfụma ma ọ naghị etinye ego - ma ọ bụ oge.
Ma amaara m mmetụta gị banyere ịzụ ahịa .. belụsọ mgbe m nọ "ichu nta".